महिला हिंसाको चरम रूप : परिवार नै लागेर १३ वर्षदेखि कुटपिट
लिलु डुम्रे बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७, १८:४०
काठमाडौं- २०६४ सालदेखि एक महिलाले निरन्तर १३ वर्षसम्म परिवारका सदस्यबाट यातना खप्न बाध्य भएको पाइएको छ। रुपन्देहीस्थित देवदह नगरपालिका-७ की गीता अर्याल (भट्टराई)लाई परिवारकै सदस्यहरू मिलेर निरन्तर रूपमा कुटपिट गर्दै आएको पाइएको हो।
पाल्पा माडीबाट २०६४ सालमा देवदहका भुवन भट्टराईसँग गीताको विवाह भएको थियो। भट्टराई परिवारले दाइजोको निहुँ बनाएर बिहेलगत्तैदेखि निरन्तर रूपमा आफूमाथि कुटपिट गर्दै आएको पीडित गीताले बताएकी छन्। पछिल्लो समय सम्पत्ति रोक्काको मुद्दालाई आधार बनाएर भट्टराई परिवारले आफूमाथि ज्यादती गरेको उनको भनाइ छ।
पीडित महिलाका ससुरा हरिप्रसाद भट्टराईले ‘सामाजिक रवाफ’ देखाउँदै बुहारी गीतालाई कुटपिट गर्ने गरेको उनकै छिमेकीहरूले समेत बताएका छन्।गीताका नन्द/आमाजुले समेत ससुराको ‘कुकर्म’मा साथ दिँदै आएका छन्। नन्दआमाजू माइतीघर आएर आफूमाथि कुटपिट गर्ने गरेको गीताले नेपाल लाइभसँग बताइन्।
पछिल्लो पटक कार्तिक ८ अर्थात् महाष्टमीका दिन गीतामाथि कुटपिट भएको हो। कुटपिट गर्दा नन्द/आमाजुसमेत सहभागी भएको उनले बताइन्। नेपाल लाइभलाई प्राप्त उनको तस्बिरमा शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम देखिएको छ।
गीतासँग २०६४ सालमा बिहे गर्ने समयमा भट्टराई परिवारले दाइजोको आशा गरेको थियो। भट्टराई परिवारका भुवन एक्ला छोरा थिए। सासूले दाइजोमा मोटरसाइकलको आशा गरेपनि माइती पक्षले दिन नसक्ने बताएको थियो। उनले भनिन्, ‘दाइजो कम भयो भनी यातना दिन सुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म पनि कुटपिट भइरहेको छ। कोठामा थुनेर पटकपटक पिटेका छन्।’
परिवारसँगै बस्दै आएकी गीतामाथि चरम हिंसा भएपछि उनी गत असारदेखि छुट्टै बस्दै आएकी छन्। कुटपिट सहनै नसक्ने अवस्थाले अर्कै घरमा बस्दासमेत परिवारका सदस्य आएर कुट्ने गरेको उनले सुनाइन्।
गीताका पति भुवन भट्टराईको २०७६ को माघमा मृत्यु भएको थियो। गीतासँग सम्बन्ध समधुर नभएपछि पति भुवनले दुई वर्षपहिले मात्र दोश्रो विवाह गरेका थिए। जेठी पत्नि गीताले सम्बन्ध विच्छेदको स्वीकृति नदिँदानदिँदै भुवनले दोश्रो बिहे गरेका थिए।
गीताको मञ्जुरी विना भुवनले दोश्रो बिहे गरेपछि अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा परेको थियो। गीताले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि भट्टराई परिवारको सम्पत्ति रोक्का भएको छ। श्रीमानले दोश्रो बिहे गरेपछि दुई वर्षअघि अंशबण्डा र बहुविवाहको मुद्दा गीताले दर्ता गराएकी थिइन्।
दोश्रो विवाहको मन्जुरी नदिएपनि स्थानीय तहले विवाह दर्ता गरिदिएको ढिलो गरी आफूले थाहा पाएको गीता बताइन्। बहुविवाहको मुद्दा दर्तापछि श्रीमानले दोस्री श्रीमती लिएर आफ्नो थातथलो छोडेका थिए।
गीताले सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा अदालतमा दायर गरेपछि ससुरा उनीसँग थप क्रुद्ध भएका थिए। सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।लकडाउन अघि दुई पटक पेसी तोकिएको मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन।
‘सम्पति रोक्का भएपछि छोरा (भुवन) तेरो कारणले नै मरेको भन्दै पिट्न थाल्नु भयो,’ गीताले नेपाल लाइभसँग भनिन्। गैडाकोटमा टिप्परले ठक्कर दिएपछि भुवन (पीडितका श्रीमान्)को मृत्यु भएको थियो। दोस्री श्रीमतीतिर भने भुवनका एक छोरा र एक छोरी छन्। श्रीमानको मृत्यु भएपछि दोस्री श्रीमती माइतमा बस्दै आएकी छन्।
आफूमाथि कुटपिट हुँदा सहयोग गर्न आउने छिमेकीले समेत पिटाइ खानुपर्ने अवस्था रहेको गीताले सुनाइन्। स्थानीय अगुवाहरू सम्झाउन जाँदा उल्टै उनीहरु नै हप्की खानुपरेको स्थानीय एक अगुवाले बताए। उनले भने, ‘कुटपिट सयौंपटक भयो। पहिले दाइजोको निहुँ थियो। अहिले सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको निहुँ बनाइएको छ। छिमेकीसमेत आजित भयौं।’
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीसमेत रहेका गीतका ससुराले निजी विद्यालय पनि सञ्चालन गरेका छन्। सरस्वती बोर्डिङ स्कुलको सबै स्वामित्व भट्टराईका नाममा छ। ससुराको नाममा एकल स्वामित्व हुनुअघि गीताले त्यसै विद्यालयमा पढाउँदै आएकी थिइन्। श्रीमानले दोश्रो विवाह गरेपछि थप तनावले पनि पढाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
भट्टराई परिवारले ११ वर्षीय आफ्नै छोरीलाई समेत आफ्नो साथमा राख्न नदिइएको उनले सुनाइन्। ‘मलाई खराब देखाउन छोरीलाई आफूसँगै राखेर मम्मी नै खराब पार्न खोजिरहेका छन्,’ उनले भनिन्। बुहारीलाई यातना दिदैं आएका भट्टराईसँग यसबारे सम्पर्क गर्न दर्जनौँ पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटबारे किन बोल्दैनन् देउवा?
के गर्दैछन् संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोग?
कसरी मत्थर भयो कांग्रेस विवाद?
भक्तपुरमा १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत, एक यवुक पक्राउ भक्तपुरमा १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–७ माने घर भई भक्तपुर... आइतबार, मंसिर १४, २०७७
ब्राउनसुगरसहित ६ जना पक्राउ शनिवार अपरान्ह ५ बजे ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले धरान–१० का ३१ वर्षीय बिकी श्रेष्ठलाई ८ ग्राम ५० मिलिग्राम ला... आइतबार, मंसिर १४, २०७७